Ntuziaka nke Design Graphic Jargon | Martech Zone
Y’oburu na gi bu udiri ahia kwuo okwu jargon na atụmatụ, eleghị anya ị na-arụ nnukwu ọrụ n'oge a. Anyị na-agwa ndị folti IT, ndị mmepe na ndị nrụpụta… ma anyị na-atụgharịrị oge niile n’etiti ha niile! Emere bụ ụlọ ọrụ dijitalụ na-emeri emeri nke mepụtara ọmarịcha ihe ọmụma a iji nyere ndị mmadụ aka ịghọta ụdị agba na ụdị faịlụ.
Na ngwaọrụ nke oge a nwere otutu onyonyo onyonyo na ụdị faịlụ yana mkpakọ na-enye ọsọ na ogo… ọ dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ka ha ghọta ọdịdị ala na ọdịiche.
Tags: aicmykagbaagbamkpakọnjupụtaEPSụdị faịlụgifagba hexidecimalonye ihe ngosiimage mkpakọinddatụghị atụjpegjpgotfpdfPhotoshopEeebipụta eseresepsdquark awara awaranwxdIkergbagba agbasvgnghọtattfngwaihe osise weebụ